स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९: धनकुटाभरि ६८ प्रतिशत मत खस्यो – Dhankuta News : Daily Online News From Nepal
स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९: धनकुटाभरि ६८ प्रतिशत मत खस्यो
२०७९, ३१ बैशाख शनिबार १०:३२
धनकुटा । वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लाभरि ६८ प्रतिशत मत खसेको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनकुटाले दिएको तथ्यांक अनुसार कुल मतदाता संख्या १ लाख १५ हजार ९ सय ६४ मध्ये ७८ हजार ४ सय १७ जनाले मात्रै स्थानीय तह निर्वाचनमा भोट हालेका छन् । बाँकी ३७ हजार ५ सय ४७ जना मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् ।
धनकुटामा तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका गरि सात स्थानीय तह रहेका छन् । सात स्थानीय तहमध्ये छथरजोरपाटी गाउँपालिकामा ६८ प्रतिशत मात्रै मत खसेको छ । १३ हजार ५ सय ४२ जना मतदाता रहेकोमा ९ हजार २ सय ५ जनाले मात्रै मतदान गरेका छन् ।
त्यस्तै चौविसे गाउँपालिकाको १४ हजार १ सय २७ जना मध्ये ७१ प्रतिशत अर्थात ९ हजार ९ सय ८७ जनाले मात्रै मतदान गरे ।
पाख्रिवास नगरपालिकामा पनि ६६ प्रतिशत मात्रै मत खसेको छ । १७ हजार ८७ जना कुल मतदाता रहेकोमा ११ हजार २ सय ९४ जनाले मात्र मतदान गरेका छन् ।
यता साँगुरीगढी गाउँपालिकाको १६ हजार २ सय ४१ मतदाता मध्ये ११ हजार ५ सय ५२ जना मतदान प्रक्रियामा सहभागि भएका छन् ।
जिल्लाको सबैभन्दा बढी मतदाता रहेको धनकुटा नगरपालिकामा ७१ प्रतिशत मत खसेको छ । यस नगरपालिकामा २२ हजार ९ सय ७१ जना कुल मतदाता रहेकोमा १६ हजार ४ सय १९ जना मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए ।
महालक्ष्मी नगरपालिकामा पनि ६७ प्रतिशत अर्थात १२ हजार ३ सय ३१ जनाले मात्रै मतदान गरेका छन् । यस नगरपालिकामा १८ हजार ४ सय ६० जना मतदाता छन् ।
सहिदभूमि गाउँपालिकामा पनि ५६ प्रतिशत मात्रै मत खसेको छ । १३ हजार ५ सय ३६ जना मतदाता रहेको यस गाउँपालिकामा ७ हजार ६ सय २९ जनाले मात्रै मतदान गरे ।
७ वडा रहेको यस गाउँपालिकामा एक वडामा भने मतदान प्रक्रिया स्थगित भएको छ । सहिदभूमि गाउँपालिका वडा नं. ६ स्थित ठाकुरदेवी माध्यमिक विद्यालय र ६ नंं. वडा कार्यालय मतदान स्थलका तीन वटै केन्द्रको मतदान प्रक्रिया स्थगित भएको छ । मतदान प्रक्रियाको बिषयमा लोकतान्त्रिक गठवन्धन र नेकपा एमालेका प्रतिनिधि वीच विवाद हुँदा मतदान स्थगित भएको हो । विहान साढे ११ बजे देखि यस केन्द्रमा मतदान प्रक्रिया रोकिएको थियो । अशक्त, असहाय, तथा ज्येष्ठ मतदाताहरुको तर्फबाट एउटै व्यक्तिले पटक–पटक मतदान गरेको विषयमा विवाद भएको थियो । विवाद सुरु भई मतदान कार्य अवरुद्ध भई पटक पटक सर्वदलीय वैठक राख्दा समेत वेलुकाको ५ बजे सम्म पनि विवादको निरुपण हुन सकेको थिएन । सहिदभूमि निर्वाचन कार्यालयले विवादका वीच मतदान कार्य सञ्चालन गरे थप भौतिक क्षति समेत हुने निष्कर्ष निकाली मतदान प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।
तीन केन्द्रमा २५ सय १३ मतदाता रहेका छन् । मतदान प्रक्रिया स्थगित हुनुपूर्व ८ सय १२ मत खसेको थियो । तीन वटै केन्द्रमा निर्वाचन आयोगले नयाँ मिति घोषणा गरेपछि मात्रै मतदान प्रक्रिया सुरु हुने निर्वाचन अधिकृत रुद्रमणी गिरीले बताए । उनका अनुसार मतदान भएपछि मात्र एकै पटक मतगणना हुनेछ । विवाद ख र ग केन्द्रमा नभई क केन्द्रमा भएको थियो । पून नयाँ प्रक्रियाबाट निर्वाचन हुने की स्थगित गरिएकोबाट सुरु हुने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयमा भर हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरज श्रेष्ठले बताए ।
तस्विरमा: धनकुटा नगरपालिकाकाे मेयरका उम्मेदवार दिनेश राई र उपमेयरका उम्मेदवार गणेश बिष्टलाई हिलेबासीको भब्य स्वागत
धनकुटा कांग्रेसद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई बधाई तथा मतदाताहरुलाई धन्यवाद